Home » သတင်း » IBC သတင်းများ: Fortium Aspera နှင့်အတူMediaSeal®နယူးလုံခြုံရေးဆန့်ကျင် Ransomware Feature ကိုဖော်ပြပေး
လန်ဒန် - Fortium Technologies ကအတူတွဲဖက်အတွင်းခိုးမှု, မတော်တဆဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ransomware ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာကာကွယ်ဘို့က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် Aspera တစ်ဦးက IBM ကုမ္ပဏီ, IBC 2017 အမ်စတာဒမ်၌ဤတစ်လမှာ။
ကြွင်းသောအရာ-မှာ on-the-ပျံသန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Fortium ရဲ့MediaSeal® encryption ကို Aspera ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း. ပလက်ဖောင်းတစ်ခု integratable အင်္ဂါရပ်အဖြစ်သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ ပါဝင်သည်အကြောင်းအရာစာဝှကနေ ransomware ကို detect နှင့်လုပ်ကွက်အသစ်တစ်ခု MediaSeal လုံခြုံရေး feature ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ MediaSeal ရုံလွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်းတစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်မကိုဖြတ်ပြီးလုံခြုံထိခိုက်မခံတဲ့အကြောင်းအရာစောင့်ရှောက်ပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Aspera မိတ်ဖက်ရပ်တည်ချက်, 7.G20 အပေါ် IBC မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
"ဆိုက်ဘာပြစ်မှုများ၏တိုးပွားလာဖြစ်ပွားမှုကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောယင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်လျှောက်လုံးအပိုဆောင်းလုံခြုံရေးလျှောက်ထားရန်စေသည်," Fortium Technologies က CEO ဖြစ်သူ Mathew Gilliat-Smith ကပြောသည်။ "က၎င်း၏အသစ်သော Anti-ransomware အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ MediaSeal စိတ်ထဲကုမ္ပဏီတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေးသွားမှာပါ encryption ကိုထင်သာမြင်သာရှိမှုနှင့်တစ်ပုံစံတည်း, အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပျက်အောင်နေဖြင့်လိုအပ်ပါတယ်။ file တွေကိုအကူးအပြောင်းသို့မဟုတ် Post-ပေးပို့အတွက် disk ပေါ်မှာ encrypt မလုပ်ထားသည့်ပုံစံ၌နထေိုငျဘယ်တော့မှလိုအပ်ပါတယ်။ "
MediaSeal ရဲ့အသစ် ransomeware ပိတ်ဆို့ခြင်း feature ကိုအလိုအလျှောက်အထိခိုက်မခံဖိုင်တွေသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရအစီအစဉ်များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ MediaSeal လုံခြုံရေးအရေးပါသောနောက်ထပ်အလွှာများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရခြင်းနှင့် spoofed အစီအစဉ်များကိုတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် file ကိုအဆင့်မှာအစီအစဉ်များ filter နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပေးနိုင်သည်။
"ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ Workflows တစ်လျှောက်လုံးလုံခြုံမီဒီယာအကြောင်းအရာစောင့်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဖောက်သည် '' တိုးမြှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအသိအမှတ်ပြုရန်။ ကျနော်တို့ Fortium Aspera ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ပို့ဆောင်မှုနည်းပညာနှင့်အတူ၎င်း၏အကြောင်းအရာလုံခြုံရေးပေါင်းစည်းကြောင်းဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ "ယောဟနျ Wastcoat ဒုတိယသမ္မတလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာကပြောပါတယ် Aspera တစ်ဦးက IBM ကုမ္ပဏီ.
Aspera Faspex ™ဆိုအကွာအဝေးကျော်, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အုပ်စုများပူးပေါင်းနှင့်မည်သည့်အရွယ်အစားလဲလှယ်ဖိုင်တွေနဲ့ directory များရန်အဘို့အကာအလိုလိုသိ, ထိရောက်လမ်းပေးပါသည်။ Aspera ကြီးမားသောအချက်အလက်မှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူတစ်ဦး-to-လူတစ်ဖိုင်ပူးပေါင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့တခု, လွယ်ကူသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်လုံခြုံက်ဘ်ပလက်ဖောင်းများအတွက်ဆို့နေသောချိုးတော်မူ၏။ Faspex အသုံးပြုခြင်း, ပူးပေါင်းအလွယ်တကူပေးပို့ခံယူခြင်း, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာမှသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်။
Fortium Technologies ကမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကသူတို့ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကျော် သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်မှုပေးသောဆန်းသစ်နည်းပညာများထောက်ပံ့ဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာလုံခြုံရေးတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ MediaSeal ဖိုင်ကိုစာဝှက်စနစ်က Windows နဲ့ Mac အတွက်အားလုံးဖိုင်အမျိုးအစားများကိုကာကွယ်ပေးသည်အပေါင်းတို့နှင့် b2b Workflows အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ Fortium ၏ထုတ်ကုန်ကိုလည်း Patronus နှင့် Blu-Lock ကိုဆန့်ကျင်က rip နှင့်အတူအကယ်ဒမီနှင့် BAFTA ဆု Screener ကာကွယ်ပေးသည်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး Fortium IBC ထုတ်ကုန်သစ်များ ထုတ်ကုန် applications များ SoftAtHome, MStar, CES2017 ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ တီဗီနည်းပညာ	2017-09-13
ယခင်: ကဲန် Truong အမေရိကတိုက်၏ FOR-တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ Named
နောက်တစ်ခု: Adorama မိတ်ဆက် "Adorama စီးပွားရေး Solutions"
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "IBC သတင်းများ: Fortium Aspera နှင့်အတူMediaSeal®နယူးလုံခြုံရေးဆန့်ကျင် Ransomware Feature ကိုဖော်ပြပေး" ။ http://www.broadcastbeat.com/ibc-news-fortium-shows-mediaseal-new-security-anti-ransomware-feature-with-aspera/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။